विवाह गर्नको लागि आज सम्म राम्रो केटा पाएको छैन्. – List Khabar
Home / Uncategorized / विवाह गर्नको लागि आज सम्म राम्रो केटा पाएको छैन्.
विवाह गर्नको लागि आज सम्म राम्रो केटा पाएको छैन्.
admin December 27, 2021 Uncategorized Leaveacomment 61 Views
को-रोना सङ्क्रमण दर बढ्न थालेसँगै, विज्ञहरुले दिए चौथो लहर आउने चेतावनी !
आखिर राष्ट्रिय टेलिभिजनमा नायिका स्वस्तिमा खड्काले किन बोलिन् अ”श्लील शब्द?? के हो वास्तविकता?? हेर्नुहोस भिडियो
एजेन्सी- बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हा आफुलाई विवाह गर्नको लागि सक्षम र सुशील केटाको नपाएको बताएकी छिन् । बलिउडमा दर्जनौ फिल्ममा अभिनय गरेकी उनि आफ्नो विवहको लागि क्षमता वान केटाको खोजिमा दौडि रहेकी छिन् । उनि फिल्म दबंगबाट बलिउडमा पाइला राख्न सफल भएकी छिन् ।
उनले हरेक कार्यक्रममा भनेकै रहेकी हुन्छिन् । मेरो अभिभावकहरू मैले सुशील केटासँग प्रेम गरेको हेर्न चाहन्छन् ।सोनाक्षीले दाबिका साथ भनेकी छिन् । ९ वर्ष बिताइ सक्दा पनि मेरो नाम कुनै केटा संग जोडिएको छैन् । उनलाई दबग नायिका भनेर पनि चिनिने गरिन्छ । उनलाई ३७ लाख (भारु) ठगेको आरोप लागेको छ । गत वर्ष, ३७ लाख रुपैयाँ ठगेको आरोपमा उनीसँगै अन्य ५ जना विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको थियो ।
बेलाबेला आफ्ना तस्विर शेयर गरेर चर्चामा आएकै हुन्छिन् । बेला बेलामा उनि प्रेमका कारण पनि चर्चामा आउने गर्दछिन् ।उनको जन्म २ जून १९८७मा भारतमा भएको हो । २०१०मा दबंगमा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी हुन् । उनका चलचित्र बेला बेलामा विादमा पर्ने गरेका हुन्छन् । बलिउडकी बेग्लै पहिचान भएकी नायिका सिन्हा त्रुघ्न सिन्हाकी छोरी रहेकी छिन् ।
Previous ओहो !जेठी श्रीमतीले नै श्रीमानलाई कान्छी खोजेर श्रीमान कै विहेमा यसरी रमाइन (भिडियो हेर्नुस्)
Next साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस
रक्षा गरुन,असार २ गते बिहिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) कार्य कुसलतालको क्षेत्रबाट मान्यजनको …